မန္တလေး ဂွမ်းရုံဈေးအနီး စိန်ပန်းတိုက်ခန်း
တိုက်ခန်းတွင်ပါဝင်သည့် facilities များ - အိမ်သာ ၊ ရေချိုးခန်း ၊ ကြွေပြားကပ်ပေးမည်။ - မီးဖိုခန်းအတွင်း စတီးဘေစင် နှင့် မီးဖိုခုံနံရံအား ကြွေပြားကပ်ပေးမည်။ - အခန်းတိုင်းတွင် မီးနှင့်ကိုယ်ပိုင်မီတာတစ်လုံးစီ ပါဝင်မည်။ - ကိုယ်ပိုင်ရေစက်၊ ရေပိုက်ခေါင်း (၄) လုံး...
ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ဝန်းနှင့် သီးသီးသန့်သန့် နေလိုသူများအတွက် - မန္တလေး~မိုးကုတ် အမြန်လမ်း (၈) မိုင် (၄) ဖာလုံရှိ မန်းဧကရာဇ် အဆင့်မြင့်လုံးချင်းအိမ်ရာစီမံကိန်းကို - စုစုပေါင်း မြေဧက (၆၅) ဧကပေါ်တွင် မြေကွက်ပေါင်း (၅၈၈) ကွက်...
မန္တလေးမြို့ရှိ Sky Villa ကွန်ဒို
Sky Villa Condo သည် အောင်မြေသာဇံ အမှတ် ၁၅/အေ ၊ ၂၂လမ်း ၊ ၈၁ လမ်းနှင့် ၈၂ လမ်းကြား ၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့ ၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်တွင် N.T.L Construction Group မှတည်ဆောက်ထားပါသည်။ - (၁) ဧကခန့်ရှိ ဂရန်မြေပေါ်တွင် 100% တည်ဆောက်ပြီးစီး - မာစတာအိပ်ခန်း (၂) ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း (၂) ခန်း ၊ Living ၊...
သာကေတ ၊ ရှုခင်းသာမြို့ပတ်လမ်းမပေါ်ရှိ Emerald Bay ကွန်ဒို
Emerald Bay အိမ်ရာစီမံကိန်းသည် ရှုခင်းသာမြို့ပတ်လမ်းပေါ်တွင် Golden Paragon Co.,Ltd. မှတာဝန်ယူတည်ဆောက်ပါသည်။ - ဂရန်မြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ - Sky Garden ၊ ရေကူးကန် ၊ အားကစားခန်းမ ၊ ကလေးကစားကွင်း စသည့် ကွန်ဒို facilities အပြည့်အစုံပါဝင်သည်။ - Emerald Bay အိမ်ရာစီမံကိန်းသည် ပြီးပြည့်စုံတဲ့...
* တစ်လွှာတွင် (၄)ခန်း (၈)ထပ်အဆောက်အဦး * မာစတာ (၂) ခန်း ၊ ရိုးရိုး (၁) ခန်း ၊ Kitchen ၊ Living ၊ Dining * ကားပါကင် ၊ ဓါတ်လှေကား ၊ အားကစားခန်းမ * 1301 sqft မှ 1352 sqft အထိ (၄)မျိုး ကွန်ဒိုတွင်ပါဝင်သည့် Facilities များ - သာယာရေး ရန်ပုံငွေ သိန်း ၃၀၀- ကားပါကင်- ဓါတ်လှေကား- အားကစားခန်းမ- မီးစက်- ထရန်စဖော်မာ-...
17 Residence ကို အမှတ် - ၁၇ ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း ၊ ၁၄ ရပ်ကွက် ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် AMPS Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ - (1) Units (8)Storeyed- Capital Investment (100)Lakhs- Pile Foundation System- Basement Carparking- Generator (Lift & Lighting)- Lift (1)nos with Security card system- 24 hours security system- Security Control System with video intercom Location Map
City Loft အဆင့်မြင့် အိမ်ရာစီမံကိန်း
City Loft အိမ်ရာစီမံကိန်းသည် ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်နှင့် ၂၅ မိနစ်သာကွာဝေးသည့် သန်လျင်အမှတ် (၁) တံတားဆင်းဆင်းချင်း Star City အိမ်ရာဝန်းအတွင်းတွင် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတည်ဆောက်လျှက်ရှိသည်။ ကောင်းမွန်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကို ဖန်တီးဖို့အတွက် အဓိကကျတဲ့ အချက်ကတော့...
မန္တလေးမြို့ရှိ အသင့်နေနိုင်မည့် Kha Yae Residence
အမှတ် (၁၀) ၊ ခရေလမ်း ၊ ၆၄×၆၅ လမ်းကြား (သိပ္ပံလမ်း မှဝင်ပါ) ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့ တွင်တည်ရှိသည်။ 100% ဆောက်လုပ်ပြီး ၊ BCC ကျပြီးဖြစ်၍ အသင့်နေနိုင်သည်။ ဝယ်ယူပြီး အငှားထားမည်ဆိုပါက နိုင်ငံခြားသားအငှားဈေးကွက်ရှိသည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ကွန်ဒို...
The Vista Luxury Residence ကို - အရည်အသွေးစိတ်ချရသည့် Ta Gaung Bwar Construction မှတည်ဆောက်ထားသည်။- ၆ ထပ် အဆောက်အဦးဖြစ်ပြီး တစ်လွှာတွင် ၉ ခန်းပါဝင်သည်။- 984 sqft မှ 1648 sqft အထိရွေးချယ်နိုင်သည်။- Facilities အပြည့်အစုံပါဝင်သည်။- အခန်းများမှ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို အနီးကပ်ထင်ရှားစွာ ပူဇော်နိုင်မည်။ The Vista...
စမ်းချောင်းရှိ အတိုးမဲ့အရစ်ကျဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် Padonmar Condo
Padonmar Condominium သည် စမ်းချောင်းမြို့နယ် တွင်တည်ရှိပြီး 70% ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီးဖြစ်သည်။ အတိုးမဲ့အရစ်ကျဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည်။ အိပ်ခန်း ဖွဲ့ပေးပြီး ရေချိုးခန်း ၊ အိမ်သာ ကို ကြွေပြားများကပ်ပေးမည်။ ဘိုထိုင်၊ ဘေစင်၊ shower၊ tap၊ ရေပူ ၊ ရေအေးလိုင်းများ ပြုလုပ်ပေးမည်။ Ceiling...